ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင်
Posted by weiwei on Jun 25, 2012 in Critic, Think Different | 47 comments
Channel7 ရုပ်သံလိုင်းပေါ်လာပြီးနောက်မှာ ကြည့်စရာ တီဗီအစီအစဉ်တွေ ပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ အစီအစဉ်အသစ်တွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ အပြိုင်အဆိုင် တင်ဆက်နေကြတာကို အချိန်လုပြီး အသဲအသန်ကြည့်ဖြစ်ရင်း ငါးတန်းနှင့်ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ကြည့်မိသွားပါတယ်။
အစီအစဉ်ထဲမှာပါတဲ့ အဆိုတော်တွေက အနဲဆုံးတော့ ဘွဲ့ရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ငါးတန်းကလေးတွေကိုတောင် မနိုင်ဘူးတဲ့ ….
ဒါနဲ့ပဲ ဘယ်လိုတွေမေးလို့ သူတို့မဖြေနိုင်ကြတာပါလိမ့်ဆိုတာ သိချင်တာနဲ့ သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်လိုက်တော့မှပဲ ပို့စ်ရေးတင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။
ကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမတန်းကနေ ပဉ္စမတန်းအထိ အတန်းတွေထဲကနေ မေးခွန်း ၁ဝ ခု မေးထားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မေးခွန်းတွေကို ရွေးပြီး တဆင့်ချင်းဖြေရတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ ကျွန်မလဲ ကြည့်ရင်း လိုက်ဖြေကြည့်ပါတယ်။ မေးခွန်းအားလုံးကို မဖြေနိုင်ပါဘူး။ သမိုင်းထဲက နံမည်တစ်ချို့ကို မေ့နေခဲ့ပါပြီ။ တစ်ချို့ကဗျာတွေကိုလဲ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ဗဟုသုတ၊ အခြေခံသချင်္ာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို အဖြေသိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လာဖြေကြတဲ့ အဆိုတော်တွေအများစုက အခြေခံအဆင့်ကိုတောင် မဖြေနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်မ အံ့ဩရပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်စားလဲ ရှက်မိပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုလေးလေးနက်နက်ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်။
ဘွဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်က ငါးတန်းအင်္ဂလိပ်စာကို မဖြေနိုင်တာကို ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ တစ်ယောက်လဲမဟုတ် နှစ်ယောက်လဲမဟုတ် အများစုအားနဲနေတာကို မြင်နေရပါတယ်။ ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကြောင့် အခုတော့ မြန်မာပြည်က ပညာရေးစနစ်အားနဲမှုကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ စနစ် … စနစ် … စနစ် ကြောင့်လား …
အဲဒီအစီအစဉ်ထဲမှာ ဝင်ပြိုင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုအကြံပေးရင် ကောင်းမလဲ????
၁။ ပထမတန်းကနေ ပဉ္စမတန်းအထိ စာအုပ်တွေအားလုံးကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ ဖတ်သွားသင့်တယ် …
၂။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသေချာရင် သွားမပြိုင်တာကမှ ပိုကောင်းမယ် …
ကဲ … စာဖတ်သူတွေရော ဘယ်လိုထင်သလဲ … ကျွန်မကတော့ စိတ်ထဲမှာ ကျလိ ကျလိ ဖြစ်လွန်းလို့ …
၁)လူစိတ်ဝင်စားလာအောင် လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း..
၂)တကယ်လည်း ဘွဲ့ရတစ်ယောက်က မတတ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း..
သများဒို့ သွားပြိုင်လို့ကတော့ ဂွမ်းမှာသေချာဒယ်
အဲလို ဆိုတော့လည်း မကောင်းပြန်ဘူးဗျ
ကလေးတွေ စိတ်ကြီးဝင်သွားမှာ စိုးရတယ်
စိတ်အားတတ်အောင် လုပ်ပွဲဆင်တယ်ဆိုလည်း တခြားနည်းနဲ့ မြေတောင်မြှောက်ပေးသင့်တယ် ထင်မိပါ၏
အဲဒီ့အစီအစဉ်ကို သွားကြည့်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ပြောပြချက်အရတော့ အဲဒါကပေါ့လေ… ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ဒိုးစနစ်ပြောသလိုပြောရရင်တော့ လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ လုပ်ပွဲလို့ပြောပါတယ်။ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပဲ သက်သက်လုပ်တာကို ကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သေချာမသိတော့ အတိအကျမပြောရဲပါ။
ချယ်နယ်လ်ဆဲဗမ်းက လာတာကို … စောင့်တော့မကြည့်ခဲ့ဖူးပေမယ့် .. လျှပ်တပြတ် ၊ တော့ ခဏခဏ ကြည့်ဖြစ်တယ် … ။ ကျွန်မထင်တာကတော့ … တမင်ကို မသိဘူးဆိုပြီးစည်းဝါးကိုက်ထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ် … ။
အစီစဉ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုက … ကလေးတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် proud ဖြစ်အောင်ပဲ … လုပ်ထားသလားလို့လေ … ကလေးနဲ့ လူကြီးယှဉ်ပြနေရင်း ကလေးတော်သွားတာထက် ၊ လူကြီး ညံ့ပြတာကိုက အစီစဉ်ကို လူစိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်မှုများလားပဲ … ။
အဲဒီအစီအစဉ်လေးကို နွယ်ပင်လည်း ကြည့်ဖြစ်တာ (3/4) ခါလောက်ရှိပြီ
တစ်ချို့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တော်တော်ဖြေနိုင်တာတွေ့ပြီး
တစ်ချို့ကျတော့ မဝေပြောသလိုပဲ တော်တော်လေးလွယ်တဲ့
မေးခွန်းတွေတောင် မဖြေနိုင်တာတွေ့ရတယ် တစ်ခါတစ်လေ
သူတို့အစားကြည့်နေရင်းနဲ့ အားလိုအားမရ ဖြစ်မိတာတွေရှိတယ် …
အင်း..အဲဒါပဲဗျ..ကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အားမလို အားမရဖြစ်လာမယ်။
အဲလိုဖြစ်လာတာကနေ အဲဒီ အစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားလာမယ်။
ကြည့်သူများလာလေ သူတို့ အောင်မြင်လေပေါ့။
အဲဒီ flow ပါပဲ..
အဲဒီအတွက် အနုပညာရှင်တွေကို အသုံးချလိုက်တာပဲ..
အနုပညာရှင်တွေကို ပြည်သူတွေက စိတ်ဝင်စားတယ်လေ..
သူတို့ ဖြေနိုင်လား မဖြေနိုင်ဘူးလားကိုလည်း သိချင်ကြတာပဲလေ…
ကြည့်ဖို့ကို အချိန်မရလို့ ခုထိမကြည့်ဖြစ်သေးပါဘူး…. မဝေဝေရယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်
ညံ့နေတာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဗန္ဓုလရဲ့ ငယ်နာမည် “ မောင်ရစ်”ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း မေ့နေလို့ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကတော့ သိသင့်ပါတယ်နော်။
မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းလာအောင် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ထားဖို့ကောင်းတယ်နော်။
ကျွန်မကတော့ လုပ်ဇာတ်လို့မထင်မိဘူး … တကယ်မသိတာလို့ပဲ ထင်ပါတယ် …
သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က နောက်ဆုံးမေးခွန်းအထိရောက်ဖို့ မလွယ်အောင်လုပ်ထားပြီး အရှုံးပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့် အရမ်းလွယ်တဲ့ မေးခွန်းမှာတော့ သိရင် သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဖြေကြတာပဲ … မျက်နှာအမူအယာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် …
နီနီခင်ဇော်ဖြေတုန်းက အများကြီးဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ် …
အဆိုတော်တိုင်းတော. ဘွဲ.ရတွေ မဟုတ်ဖူး ထင်တယ်။ ကလေးစာတွေ တကယ်မမှတ်မိနိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပျော်တမ်း game လေးဆိုတော. ကြိုလဲ ဖတ်မသွားကြဖူးထင်တယ်။ ဒါပေမယ်. Maths နဲ. English လောက်ကတော. သိသင်.ပါတယ်။ အဆိုတော် နီနီခင်ဇော် ဖြေနေတာ တခါကြည်.ဖူးပါတယ်၊ သူဖြေနိုင်သားပဲ။ အစ အဆုံးတော.မကြည်.ဖြစ်ခဲ.ပါဘူး။
မတူတဲ့ တန်းနှစ်ခုကို အတင်းညီမျှချင်းချထားတော့ ရလာဒ်တွေက အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေ မဲ့လဲဒါမျိုး အစီအစဉ်က နိုင်ငံခြားမှာလဲရှိတယ်။ ကျောင်းသားတွေတဖွဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအဖွဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေတဖွဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေတဖွဲ့ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေဖြေကြတာရှိပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေက ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ မဖြေနိုင်ဆုံးအဖွဲ့တွေဖြစ်နေတာ အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
အစ်မသဲနုအေးရေ … တီဗွီက ထုတ်လွင့်တဲ့ အစီစဉ်အတော်များများက … ရိုက်ကူးမှု မစတင်ခင်ကတည်းကိုက … ကြိုတင်ညှိထားကြတာမျိုးမြင်ဖူးပါတယ် …ဥပမာ … ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲက အင်တာဗျူးဆိုလျှင်တောင် ဘာတွေမေးမယ် ..ဘယ်လိုဖြေမယ်ဆိုတာ ကြိုညှိထားကြရတာမျိုးလေ … ။ အနုပညာရှင်ဆိုတာ … သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူအောင် ဟန်ဆောင်တတ်ပါတယ် … ။ ဒီတော့ တကယ်မသိဘူးဆိုတဲ့ အိုက်တင်လောက်တော့ .. မင်းသားမင်းသမီးတင်မဟုတ်ဘူး … အဆိုတော်တွေပါ .. လုပ်တတ်လောက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဟုတ်တယ်ဗျ…ဩရသ ဖြေတုန်းကလဲ do. does. did နောက်မှာ ဘာလိုက်သလဲတောင်မသိဘူး.. ဟိဟိ
ကျွန်တော်လဲ မဝေကြီး တွေးသလိုပဲ တွေးမိပါတယ်
ကိုယ့်သိက္ခာကျလောက်အောင်တော့ မသိဘူး မဖြေလောက်ပါဘူး
မင်းသမီးလေးက(ချောချောလေး) အင်္ဂလိပ်စာဖြေမယ်လို့ ရွေးလိုက်တယ်
The Irriwaddy river ……..from north to south.
မင်းသမီးလေးက မသိဘူးတဲ့ ၊ တစ်ခု ဖြေကြည့်ပါဦးဆိုတော့ is တဲ့
အဲဒါနဲ့ presenter က ဒါဆို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ဖြစ် တာလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး စီးတာတဲ့
ဟုတ်ပြီ အဲဒါဆို အဖြေဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတော့ စီးတာ မို့ ride တဲ့
presenter တောင် စိတ်ညစ်သွားတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားတယ်
အင်း ဧရာဝတီကို မြင်းလုပ်စီးမဲ့ အာဂမင်းသမီးလေးရယ် လို့ ပြောရင်ကောင်းမလားပဲ
ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ အသွေးထဲအသားထဲက
တစ်ရက်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းက ..
Is Kyaw Kyaw ……. you?
Yes, Kyaw Kyaw is helping me.
အဲဒီကွက်လပ်လေးကို ဖြည့်ခိုင်းတာ … မင်းသမီးလေးက helps တဲ့ …
အဲဒါထက်ဆိုးတာကတော့ ၄ မိုက်မှာ ဘယ်နှစ်တောင် ရှိလဲလို့မေးလိုက်တာကို တစ်တောင်နဲ့တစ်မိုက်တဲ့ …
အဲဒီလို … အဲဒီလို … တွေ မှားတာတွေကို မြင်ရလို့ မြန်မာပြည်ပညာရေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအခြေအနေကို သိနိုင်တာပေါ့နော် …
ပညာရေးပိုင်းနဲ. ဗဟုသုတပိုင်းတွေမှာ တချို.က တကယ်အားနည်းကြတာ ထင်ပါတယ်။
အီးအဲဂလောက်တောင်လား။ ကျွန်မတို့ဆီမှာမရလို့ တခါမှမကြည့်ဖူးဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ဆိုးချက် ကတော်တော်လန်ထွက်နေတာပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် တကယ့်ကိုဒီစာရေး ရင်းရယ်မိပါတယ်တွေးလွန်းသွားတာထင်တယ် ငါးစိမ်းတန်းထင်လိုက်တာ သွားမပြိုင်ခင်ထဲက ရှက်မိပါသည် စဉ်းစားလိုက်ရင်တလွဲကြီးဘဲ
ကျနော် တစ်ခါကြည့်ဖူးတယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို ့မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။
အတော့်ကိုရှက်ဖွယ်ပါဗျာ။ဒါဟာ ကျနော်တို ့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်းကို တဖက်
နောက်ထပ် အများသိစေချင်လို ့ပါ မမဝေဝေရေ—–
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက်တွေကို (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MBA တက်နေတဲ့ သူတဲ့ ( မိစန္ဒီ)
1တန်းစာ လေး ကျမှ မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ လုပ်ဇာတ်ပဲ နေမှာပါ
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ဝေဝေ တော့ တူမလေး နဲ့ ပြိုင်ပွဲ လုပ်နေပြီ ထင်ခဲ့တာ။
အရီး ကတော့ ဝေဝေ ပြောသလို ကလေးစာတွေ ကို ပြန်ဖတ်ပြီးမှ ပြိုင်ပွဲ ဝင်သင့်ပါတယ်။
မဟုတ်ရင် ကတော့ သိတော့ မှာ မဟုတ်။
ဒါပေသည့် အင်္ဂလိပ်စာ ကို တော့ မှန်သင့်ပါကြောင်း။
အဲဒါကို လုပ်ဇာတ် ဆိုရင်လဲ စီစဉ်သူ ဟာ သူ့ လုပ်ငန်းထုတ်လွှင့်မှု နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တစ်ခြားမှာ ဗဟုသု/ ပညာ ရှာဖို့ လိုသေးပါကြောင်း။
ဒီလို အပြုသဘောဆောင် Post လေးကို သက်ဆိုင်သူတို့ သိရှိပြီး ကြိုဆို ကာ အမှန်ပြင်သင့်ပါကြောင်း။ :-)
ရွာထဲမှာ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် တစ်နေကုန်ရှိနေပေမယ့် စာရေးဖို့ ကွန်မန့်ပေးဖို့ အာရုံမရလို့ပါ အရီးလတ်ရေ …
ငါးတန်းနှင့်ပြိုင် ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ကြည့်မိရာကနေ ရင်လေးမိတာတွေ တွေ့မိလို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရွာထဲမှာ အတင်းလာပြောမိတာပါ … ကျွန်မကတော့ လုပ်ဇာတ်လို့ မထင်မိပါဘူး …
တကယ်လို့ လုပ်ဇာတ်သာဆိုရင်တော့ … အခုလိုတောင် ရေးချင်စိတ် မရှိလောက်အောင် စိတ်ပျက်မိပါတယ် …
ဂျီးဒေါ်ဝေ လို ပြောမယ့်သူ မရှိသေးလို ့၊ သူရို ့အရှက်မရှိ လုပ်နေကြတာနေမှာ
နောက်ထပ် အမြင်မတော်တာတွေ ထပ်တွေ ့ရင်လဲ ၊ ပြောပေးဘာအုန်း ဂျီးဒေါ်ဝေရေ
ကြောင်တောင်တောင် ကောင်တွေပါ။ ပေါ့ပျက်ပျက်တွေပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့ ငတုံးတွေ ဝင်ပြိုင်နေတာပါ။ တခါကြည့်ပြီးကတည်းကတိုင် အခုထိမကြည့်တော့ဘူး။ ကျကသရေတုံးလို့။
အော် …မဝေရယ် ငါးတန်းနဲ့အပြိုင်ဆိုတော့ ဈေးအကြောင်းလေးလားလို့………..ခုတော့ငါးတန်းကလေးနဲ့
တီချာလည်း တစ်ချက်ကြည့်ပြီး အပေါ်က အညာတမာရေးထားသလိုပဲ
ကျိုးကြောင်းညီတဲ့ တင်ဆက်မှုလေးတွေ ပြသင့်တယ်။ ခုဟာက လုပ်ပွဲမှန်းလည်းသိသာတယ်။
ကလေးနဲဲ့ပြိုင်လို့ နိုင်ရအောင်ကလည်း အဆင်မလှ။
ဘယ်လိုလူရဲ့တင်ဆက်မှုခပ်ညံ့ ညံ့ပါလိမ့်လို့တွေးနေသေးတာ။
အင်း ….ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။
ဘယ့်နှယ့်များ လုပ်နေကြတယ် မသိ။
ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် ဆိုုတာတော့မကြည့်ဖုုးဘူး။ “Are you smarter thanafifth grader” ဆိုုတဲ့ show တော့ကြည့်ဖူးတယ်။ အဲဒီ show က idea ယူထားတယ်ထင်ပါ့။ တမင်ဆင်ထားတာလိုု ့တော့မထင်ပါ။ ဘယ်သူမှကိုုယ်ညံ့မှန်း ပြမဲ့ပွဲမှန်းကြိုသိရင်ဝင်ပြိုင်မယ်မထင်ဘူး။
အပေါ်ကလူတွေပြောတဲ့ English and Math လောက်တော့ သိသင့်တယ်ဆိုုတာ သဘောတူပါတယ်။ ကျန်တာတွေ ငါးတန်းနဲ ့မယှဉ် နိုုင်တာတော့ ငါးတန်းကစာတွေမမှတ်မိလိုု ့ဖြစ်မှာပါ။ ဘွဲ ့ရမရနဲ့ မဆိုုင်ပါဘူး။ အသက်ကြီးလာပြီး ပိုုမြင့်တဲ့စာတွေသင်လာရတဲ့အခါသင်ပြီးသမျှစာတွေအကုုန်ခေါင်းထဲထားဖိုု ့ထက်ပိုုသုုံးနေကျ အရာတွေကိုုဦးစားပေးနေကြရတာ လူတိုုင်းပါ။ “Are you smarter thanafifth grader” show ထဲမှာ nuclear scientist PhD တစ် ယောက်တောင်နောက်ဆုုံးအဆင့်မေးခွန်းလေးမှတစ်သွားပြီးရှုံးသွားပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရတာတွေက အခြေံခံတွေ အများကြီးပါ။ ကိုုယ်လိုုတာကိုုထုုတ်သုုံးဖိုု ့ကကိုုယ့်တာဝန်ပါ။
မယှဉ်သင့်တဲ့ level တွေကိုယှဉ် လိုု ့မမျှတ ဘုူးထင်တာပဲ။
အမလေးတော် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဒွေပြောနေတာ
သများမေးတာကို စာအုပ်ပြန်မကြည့်ဘဲ ဖြေကြည့်ဂျဘာ
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာဖြတ်သွားတာက ဘာမျဉ်းလဲ ဘယ်မြို့မှာရှိတာလဲ
နောက်တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျယ်အဝန်း စတုရန်းမိုင်ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲ
စာအုတ်ပြန်မလှန်နဲ့ နော် ဒီအတိုင်းဖြေကြည့်
ငါးတန်း နှင့် ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်….
(အဲဒါ ရွှေဘိုမြင်းဖြတ်သွားတာ ကျောက်မြောင်းမြို့မှာအခုရှိတယ်)
(ခင်ဗျားက ကျနော်လာမေးနေတာ ခင်ဗျားရောသိလား သိရင် အရင်ဖြေ မှန်မမှန် တိုက်ကြည့်မယ်။)
မာမီပေါက်နဲ့ အတူတူ သွားတိုင်းဂျမယ်လေ
မျဉ်းကိုတော့ မမှတ်မိတော့တာ အမှန်ပါ…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျယ်အဝန်းက ၂၆၁၂၂၈ စတုရန်းမိုင်ဖြစ်ပါတယ်..အဲဒါကတော့ တစ်သက်လုံး မှတ်မိနေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပဲ…
မှားတယ်ဆို အဖြေမှန် ဘာလဲပြော…
အဖြေမှန်က ………… ဖြစ်ပါတယ်
မနေ့ကကြည့်မိလို့ ပြောချင်နေတာ အတော်ဖြစ်သွားပြီ…
အဆိုတော် ဆိုတေး ဖြေတာပါ…
ဧရာဝတီမြစ်မှာ မြစ်ကျဉ်း —- ခုရှိပါသည်။ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို
ချက်ခြင်းဆိုတော့ မမှတ်မိတာမျိုးတွေ ၊မေ့နေတာမျိုးတွေကို
လှောင်ခံနေရတဲ့ အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ အဆိုတော်တွေကို
မွန်မွန်က ကွန်မန့်ကို ရိုက်နေတုန်း မအိ ကွန်မန့်က အရင်တက်လာတယ်…
မနေ့က ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်…
လုပ်ဇာတ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…ကလေးတွေက ပထမတန်းကနေ ပဉ္စမတန်းအထိ စာတွေအကုန်လုံးကို ဖောက်မေးတာတောင် အဖြေကိုသိတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ…
သူတို့တွေက အတန်းတိုင်းက စာတွေကို ပြန်လေ့လာထားတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ သင်္ချာမေးခွန်းတွေကတော့ ရသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..တစ်ခြားဘာသာတွေကတော့ မွန်မွန်လည်း စဉ်းစားကြည့်တာ သိပ်မသိပါဘူး…မနေ့ကဆို မြစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမေးသွားတယ်… (၂)ခုတော့ စဉ်းစားလို့ရတယ်..တစ်ခုက မေ့နေတယ်…ဧရာဝတီမြစ်မှာ မြစ်ကျဉ်းဘယ်နှစ်ခုရှိလဲတဲ့…ရမ်းဖြီးကြည့်တယ်… (၅) ခုလို့…မှားပါတယ်…
သမိုင်းတွေဆို ပိုတောင် ဆိုးမယ်ထင်တယ်… ဘာပဲပြောပြော ဒါလေးတွေလောက်နဲ့တော့ ငါးတန်းကို ပြိုင်တာတောင် မနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောဖို့လိုမယ် မထင်ပါဘူး။
အဲဒီ အစီအစဉ်ကိုတော့ စိတ်ညစ်မိတာ အမှန်ပဲ…